Uzokuphinda lokho uMzukulu – Maskandi Media
Uzokuphinda lokho uMzukulu
UMzukulu akafikanga ugalelekile. Kuhlale kunconywa ama album amnandi nashaya esikhonkosini kodwa le kaMzukulu ngathi igijima kwelinye izinga.
Akubona ubuciko bengoma lobuyana enye into nje. Abawuvali umlomo abalandeli ngendlela abazizwa beneliseke ngakhona ngale album.
“Ngithe uma ngiyizwa okokuqala bengilindele ukuthi ngizolokhu ngithi forward njengenjwayezi kulo mculo kaMaskandi. Ngifike ngajabha uma ngithola ukuthi imnandi yonke ngeke uwushaye nakanye lo forward. Kuyint enhle nesingathanda ukuyibona iqhubeka le yokuthi abaculi bezinikele uma bengena estudio ngoba siwuthenga ngezimali esizithola kanzima lo mculo wabo”.
“Kuba nzinyana khona uma sekumele uncome ngoba phela asikhoni ukubagxeka ngoba nabo basebenza kanzima. Kunzima ukungena estudio uphume nento entsha njalo nje engakaze izwakale ndawo”. Kubeka uMaqhude.
“Ngithi angithathe leli thuba ngidlulise ukuthokoza kwami ngendlela engizwe ngayo le album entsha kaMzukulu. Kuyakhomba ukuthi umfana usephuza esizibeni eside manje la kuphuza khona inyoni enomlomo omude”.
“Ukungena ngaphansi kwe IGP kubasizile abafana. Buka into eyenziwa uDumakahle ngonyaka odlule iyamangaza. Uphinde uzobuka into eyenziwe uMzukulu kule album esikhuluma ngayo ikwelinye izinga. Ngeke ngikungabaze ukuthi inkulu into ezofika noDumakahle wakulonyaka thula nje ubuke”.
“SIyabonga kakhulu kubaculi uma besijabulisa ngalolu hlobo ngoba siyawuthanda lo mculo. Sithatha sijabhe uma sizolindiswa isikhathi eside ekugcineni kuphume ingoma encane. Benza kahle abafana kumele sibethulele izgqoko sibanike into uma ibafanele. Cha mina ngiyabanika umqhele wamaqhawe manje bakhombisile ukuthi sebezinkunzi”. Kuncoma uNjezele umfoka Sothole.
“Ngizosho njengabafwethu abaqeda kukhuluma nami ngithi phambili ngoMzukulu. Wathi uma eshaya leya ngoma eyadlalwa ngisho emamoshari ngathi mina hau lomfana kwangathi uzogcina enyakazisa amabhokisi kuphume abantu phakathi uma esenza kanje phela nazo azifunanga ukusaa ngaphandle uma kudunuswa”.
Previous Previous post: Imnandi yonke eyamaNguni Amahle
Next Next post: Ithole indawo kubantu ekaDlubheke